कोरोना संक्रमितलाई कस्तो चाहिन्छ पोषण ?
पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो छ । कोरोनालगायत अन्य संक्रमणबाट बच्नका लागि शरीरको ‘इम्युनिटी’ अर्थात् प्रतिरक्षा प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
संक्रमण बढ्दै गएका कारण अधिकांश संक्रमितहरु होम आइसोलेसन छन् ।
संक्रमण भएको अवस्थामा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई विकास गर्न र रोगसँग लड्न के खुवाउने, बालबालिका, वृद्ध, गर्भवती तथा मधुमेह, रक्तचापलगायतका अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका संक्रमितलाई के खुवाउने, कसरी खानपानको तालिका मिलाउने भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कोरोना संक्रमणबाट बच्न तथा संक्रमितलाई बेसार पानी, तातोपानी तथा अन्य जडिबुटीको सेवन गर्ने सल्लाह दिनेहरु धेरै छन् । सरकारले पनि तातोपानी र जडिबुटी प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।
मात्रा मिलाएर सेवन गर्दा शरीरलाई फाइदा भए पनि यसले भाइरस मार्ने वैज्ञानिक प्रमाण भने छैन ।
भिटामिन, औषधि तथा जडिबुटीको सेवन गर्नुभन्दा इम्यिुनिटी पावर बढाउन खानपानमा विषेश ध्यान दिनु पर्छ ।
शरीरमा रोगसँग लड्ने एन्टिबडी उत्पादन हुन नसके संक्रमणबाट बचाउन दाबी गरेका यी खानेकुराले फाइदा गर्न सक्दैन ।
संक्रमितले आफ्नो दैनिक डाइटमा समावेश गर्नु पर्ने खाना
हरेक दिनको खानामा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन र मिनिरल्स समावेश गर्नु धेरै आवश्यक हुन्छ । आहारमा पर्याप्त प्रोटिनले प्रतिरक्षा कोषहरूको गुणन र एन्टिबडीहरूको उत्पादनमा मद्दत गर्छ । एन्टिअक्सिडेन्ट पौष्टिक तत्व (भिटामिन सी, ई, ए, डी, सेलेनियम, जिंक, तामा, र म्याग्निज जस्ता खनिज पदार्थ र क्यारोटिनोइड) ले रोग लगाउने जीवाणुहरूको प्रवेश रोकेर, प्रतिरक्षा कोषलाई सक्रिय पारी एन्टिबडीको उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ ।
संक्रमितले खाने प्रत्येक छाकमा कार्बोहाइड्रेटका लागि कोदो, गँहु, मकै, फापर, चामल, आलु, पिँडालु, प्रोटिनका लागि भिजाएर राखेको गेडागुडी, दुध, माछा, कुखुराको मासु, दाल तथा भिटामिन र मिनिरलका लागि डाइटमा हारियो साग सब्जी, टमाटर, सलाद, फलफूल समावेश गर्नुपर्छ ।
भिटामिन सीका लागि अमला, कागती, अम्बकको प्रयोग गर्नु पर्छ । खानामा कागती, टमाटर, तिल समावेश गर्दा खानाबाट आइरन प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
ओखर, हाडे बदाम, फर्सीको बियाँ, आलस पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । खानामा यी सबै कुरालाई समावेश गर्न सके यसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई विकास गरी बलियो बनाउन, एन्टिबडी उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ जसले कोभिडको संक्रमणलाई मात्र नभएर अन्य रोगबाट पनि आफूलाई बचाउन सकिन्छ ।
मधुमेह, प्रेसर तथा अन्य स्वास्थ्य समस्या भएमा
मधुमेह भएका संक्रमितको खानामा रोटी, पोलिस नगरेको चामलको भात (१–२ सानो गिलास), खानामा तरकारीको मात्रा खाना जतिको वा सोभन्दा धेरै हुनुपर्छ ।
रक्तचापका लागि प्याकेज खाना, फ्राइड खाना, तेल धेरै भएको खानालाई प्रतिबन्धित गरी दैनिक ४ देखि ५ ग्राम मात्र नुनको सेवन गर्न उचित हुन्छ ।
स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूले खानामा हरियो सागसब्जी तथा तरकारीको मात्रा बढाई रातो मासुको सेवन गर्नुभन्दा कुखुराको मासु वा माछाको सेवन गर्न सकिन्छ ।
हरेक पटक खानापछि १० मिनेटका लागि हिँड्न अति आवश्यक हुन्छ । स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिले नियमित सेवन गरिरहेको औषधिको बारेमा आाफ्नो डाक्टरसँग सल्लाह लिनु पर्छ ।
गर्भावस्था वा बालबालिका संक्रमित भएमा
गर्भवती महिला र बालबालिकालाई अन्यको तुलनामा बढी मात्रामा पोषक तत्वको आवश्यक हुन्छ । त्यही भएर उनीहरूको खानामा माथि उल्लेख भएका खानाका साथै, दुधको मात्रा बढाउने (दिनभरिमा ५०० एमएल) गर्नुपर्छ ।
प्रशस्त आइरन भएको खानेकुरा, हारियो सागसब्जी, फलफूल गेडगुडी, खानेकुरासँग कागाती र टमाटरको प्रयोग गर्नाले आइरनको उपयोग राम्ररी हुन्छ ।
झोलिलो तथा पोषिलो खानाका साथै अन्डा, माछा, मासु (कलेजो), दुध वा दुधजन्य पदार्थमध्ये कुनैलाई प्रत्येक दिनको खानामा समावश गराउनु पर्छ ।
बजारमा पाइने प्याकेट खानाले शरीरको हर्मोनलाई असन्तुलन गरी आवश्यक पोषक तत्वको अवशोषणमा बाधा सिर्जना गर्ने हुँदा यस्ता खानेकुरालाई त्याग्नु नै उचित हुन्छ ।
गर्भवती महिलाले चिया, कफीको सेवन गर्न हुँदैन । बच्चालाई मोबाइल, ल्यापटप तथा टिभीको स्क्रिन अगाडि राखेर खान दिनु हुँदैन, यसरी खान दिँदा खाना खाएको राम्रोसँग पच्दैन जसले शरीरको हर्मोनलाई असन्तुलित बनाउने गर्छ ।
वृद्ध अवस्थाका संक्रमित भएमा
वृद्ध अवस्थामा शरीरलाई चाहिने क्यालोरीको मात्रा अन्य उमेर समूहको भन्दा कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भएकाहरूको पाचन प्रणाली पहिलेको तुलनामा कमजोर हुँदै जाने हुँदा पच्न सजिलो हुने खानेकुराको सेवन गर्नु नै उचित हुन्छ ।
संक्रमितलाई जाउलो, दाल, गेडागुडी, तरकारीको झोललगायत मजाले पकाएर खान दिँदा सजिलै पचाउन सक्छन् ।
एकैपटक धेरै खान दिनुभन्दा पनि पटक–पटक थोरै–थोरै खाना दिनुपर्छ । थोरै दिने खाना शरीरमा उर्जा प्रदान गर्नेखालको हुनुपर्छ । जसका लागि खानामा गाईको घ्युलाई समावेश गर्न सकिन्छ । साथै, दैनिक राती सुत्नुअगाडि एक गिलास दुधको सेवन पनि जरुरी हुन्छ ।
कोभिड संक्रमितले खान नहुने खाना
संक्रमितले शरीरको तापक्रमभन्दा कम तापक्रम भएका खानेकुरा (जस्तै, चिसो पेयपदार्थ तथा फ्रिजमा राखिएका) सेवन गर्नु हुँदैन । त्यसको साटो सर्बत, दही, मोही, लस्सीको सेवन गर्न सकिन्छ ।
सफ्ट ड्रिंक्स, चिया, मिठाईलगायतका चिनी भएको खानेकुराको सेवन गर्नु हुँदैन । चिनीको विकल्पमा सक्खर र महको प्रयोग गर्नु पर्छ । साथै मोमो, थुप्पा, निम्की, समोसा भुजिजालगायत परिष्कृत आँटाबाट बनेका खानेकुराको सेवन त्याग्नु पर्छ । साथै, पकौडा, रोस्टलगायत तेलमा तारेका, भुटेका, रातो मासु खानामा समावेश गर्नु हुँदैन । धुम्रपान, मदिरालगायतका सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले समस्या थप जटिल बनाउन सक्ने हुँदा यसलाई त्याग्नु नै उचित हुन्छ ।
प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने कसरी ?
बिहान उठ्नेबित्तिकै तातो (कागती, तुलसी, र अदुवा) पानीको सेवन गर्ने, नास्तामा बदाम, सूर्यमुखी फूलको बीउ, फर्सीको बीउ तथा आलस समावेश गर्नु पर्छ, खानामा दूध, अन्डा, अंकुरित फलफूल, ब्रोकाउली र गाढा हरियो पातदार तरकारी समावेश गर्न सकिन्छ ।
दिउँसो टमाटरको रस, सुन्तलाको रस वा कागती–पानी, सुत्ने समयमा हर्दी राखेको पानी वा दुध पिउने गर्नुपर्छ । इम्युनिटी पावर बढाउन खानपानसँगै नियमित शारीरिक व्यायाम, प्रशस्त मात्रामा पानी, राम्रो निद्रा पनि आवश्यक हुन्छ ।
इम्युनिटी पावर बढाउन सुरुमा इम्युन सिस्टमलाई कमजोर पार्ने प्याकेटका खानेकुरा, गुलियो खानेकुरा, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, धुम्रपान तथा मदिरालाई त्याग्नु पर्छ ।
हरेक दिन केही समयका लागि घाममा बस्ने तथा दैनिक दुई घण्टा व्यायाम गरी दिनभरि आराम गरेर बस्नुभन्दा पनि केही न केही शरीरिक अभ्यासहरू गरिरहनु पर्छ । सरसफाइमा ध्यान दिएर बारम्बार हात धुनु पनि त्यति नै आवश्यक छ ।
(विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले सञ्चालन गरेको कोभिड अस्पतालमा संक्रमितका लागि डाइट प्लान गर्दै आएका आहारविद् तथा पोषण विशेषज्ञ ओमप्रकाश साहसँग कोशी अनलाइनका लागि अंकिता ताम्राकारले गरेको कुराकानीमा आधारित)